Mechanical efficiency & Losses နဲ့ပကိသကိလို့ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ > စက်မှုအင်ဂျင်နီယာပညာ > Mechanical efficiency & Losses နဲ့ပကိသကိလို့
View Full Version : Mechanical efficiency & Losses နဲ့ပကိသကိလို့
Mechanical engineers အားလုံး ကို ကျွန်တေိာနုတ်ဆက်ပါတယ်ခမျာ။ ။ကျွန်တော်က BE က student တယောက်ပါ။
mechanical တွေအားလုံး efficiency &amp; Losses ကိုရင်းနှီးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးကြရအောင်။ ။ ;D ;D ;D
Efficiency ဆိုတာ output/input ပေါ့ ။efficiency ဟာ 100 percent တော့ မရှိနိုင်ပါ။ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ mechanical components တွေနဲ့ mechanisms တွေမှာ losses တွေရှိလို့ပါ။ losses=1-efficiency ပေါ့။ဥပမာ IC engine တွေမှာဆိုရင် friction losses,heat losses စတာတွေ ရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲနိုင်သမျှနဲအောင် ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားရပါမယ်။အဲဒီ losses နဲပြီး efficiency ကောင်း မဲ့ methods တွေ ,principles သိရင်ဝေငှဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ခင်မျာ။ ။
နောက်ပြီး power drives တွေထဲက gear,chain,belt drive တွေအပြင် တခြား ဘာတွေရှိသေးလဲ သိချင်ပါတယ်ခင်မျာ။ ။ ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
http://static.howstuffworks.com/gif/gear-bevel2.jpgအောင်သူ၇ :P :P :P :P :P :P :P :P
power drive တွေမှာကတစ်ချိူ. mechanisim တွေမှာအစ်ကိုပြောသလိုပါပဲ
gear,chain ,belt တွေအပြင် shaft တွေကိုပါသုံးတာတွေ.ရတယ်ဗျ
အထူးသဖြင်.vertical passageway တွေမှာအသုံးများပါတယ်
roller drives တွေရှိပါသေးတယ် ...
ကို နတ္ထိ ပြောသလိုပဲ shaft နဲ. မောင်းတာ ..
The concept of roller drives is pretty easy. A smaller shaft is pressed againstalarger disk and as the shaft is turned the disk rotates. The reduction is the ratio of the diameters of the shaft and disk. If the shaft/disk pair is pressed together very hard and the correct materials are chosen for them they won&#039;t slip as they rotate. If one cascades two or three of these shaft/disk setsareasonable gear reduction can be had:
Now everything we said above about worm gear precision above applies to these shaft/disk sets. They must me made concentric, smooth and round. If any of these three things is not precise then the rotational rate of the RA axle will vary.
If the manufacturing precision of these shaft/disk sets must be the same as worm gear sets what&#039;s the big deal? The answer is that it is very much easier to fabricatearound disk and shaft to high precision than it is to makeaprecision worm gear set. Almost any modern machine shop can fabricateashaft/disk set to the required precision where as there are very few shops that can fabricateaprecise worm gear set.
သူများမေဂျာတွေဆွေးနွေးချက်တွေအမြဲ update ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။
Drive chains are similar to drive belts in many ways, and which device is used is subject to several design tradeoffs. Drive chains are most often made of metal, while belts are often rubber, plastic, or other substances. This makes drive chains heavier, so more of the work put into the system goes into movingachain versus movingabelt. On the other hand, well-made chains are often stronger than belts. Also, drive belts can often slip (unless they have teeth) which means that the output side may not rotate ataprecise speed, and some work gets lost to the friction of the belt against its rollers.
Teeth on toothed drive belts generally wear faster than links on chains, but wear on rubber or plastic belts and their teeth is often easier to observe; you can often tellabelt is wearing out and about to break more easily thanachain. Chains often last longer.
efficiency အကြောင်းတွေနဲ. ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဆက်ပြောချင်တာလေးတွေကတော့ production အကြောင်းနဲ. Equipment Efficiency ပါ ။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း မှာ man power နဲ. material ကိုပေါင်းပြီးတွက်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီမှာ Time Efficiency ဆိုတာရှိပါတယ် ။
1 – (Downtime / Uptime ) = Efficiency %
Downtime time is the key ဘာကြောင့် စက်ရပ်ထားရသလဲ ဆိုတာ ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် ။ production data တွေထဲမှာ Downtime
ကိုလဲအဓိကထားပီး မှတ်ရပါတယ် ။ ဒါမှ maintenance plan ကိုလုပ်နိင်မှာပါ ။ production မှာရှိတဲ့ loss အချို.ကတော့
Breakdowns(စက်ပျက်ခြင်း) adjustment, Small stops and speed loss and human error ,Rejects product , quality inspection ။ ပြောရရင် နောက်ထပ် Downtime ဖြစ်စေတဲ့ loss တွေရှိမှာပါ ။
fight.gif fight.gif fight.gif
i want to study about thermodynamic.
bec this process is important for mechincal.so ok
polytropic process is how to produce efficiency n losses?
thaz u :?
Roller Bearing efficiency is 98%.
Total Efff = power( 0.98)no. of roller bearing.
Gear eff is also 96 to 98%
Total Efff = power( 0.98)no. of Gear Stagees
mechanical တွေအားလုံး efficiency &amp; Losses ကိုရင်းနှီးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
[color=black]Efficiency ဆိုတာ output/input ပေါ့ ။efficiency ဟာ 100 percent တော့ မရှိနိုင်ပါ။ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ mechanical components တွေနဲ့ mechanisms တွေမှာ losses တွေရှိလို့ပါ။ losses=1-efficiency ပေါ့။
Efficiency ဆိုတာ Power Efficiency ကိုဆိုလိုတာပေါ့နော် အေ၇ာတို့လည်း အင်/ယာ မဟုတ်ပေမယ့် Efficiency ဆိုတာကို စွမ်းရည် ဆိုပြီးကြားဖူးတယ်ရှင့်၊
စက်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပေးသွင်းရတဲ့ Input Power နှင့် ယင်းစက်က ပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ Output Power ဆက်စပ်မှုကို ဖေါ်ပြနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
အမှန်မှာတော့ ပါဝါပေးသွင်းသလောက်ပြန်ထွက်တာပါပဲ၊ စက်တည်ဆောက်သူတွေလိုချင်တဲ့ အကျိုးပြုအသုံးဝင်တဲ့ ပါဝါနဲ့ သူတို့မလိုလားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုပါဝါရယ်လို့ကွဲပြားနေလို့သာပါနော်။
ဒီတော့ စုစုပေါင်းပေးသွင်းပါဝါ = ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်သော ပါဝါ + လေလွင့်ဆုံးရှုံးသော ပါဝါရယ်လို့ ညီမျှခြင်းရယူနိုင်ပါတယ်။
ဆုံးရှုံးမှုကတော့ ပွတ်တိုက်မှုအားကြောင့်အပူဖြစ်ကုန်တာမြင်လွယ်တတ်ပါတယ်၊ ဒီ့အပြင်လည်းရှိပါသေးတယ်။
အဲဒီတော့ ထုတ်သုံးနိုင်တဲ့ပါဝါဟာ ပေးသွင်းတာထက် အမြဲငယ်နေမှာ ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။
စွမ်းရည်ဆိုရာမှာလည်း ပေးရသလောက်ရဲ့ ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှပြန်ရသလဲ သိချင်တာဆိုတော့ အ၀င်နှင့်အထွက်ကို နှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုး အချိုးချကြည့်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ချာသမားတွေကတော့ စွမ်းရည်ရာခိုင်နှုန်း ဆိုတာကိုအသုံးပြုပြီး စက်တစ်ခုခြင်းရဲ့ ပါဝါတွေပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အရည်အသွေးကိုဖေါ်ပြလေ့ရှိကြပါတယ်၊
စွမ်းရည်ရာနှုန်းရှာဖွေဖို့ အထွက်ပါဝါကိုတည်ကာ ပေးသွင်းခဲ့ရတဲ့ပါဝါနှင့်စားပြီး ၁၀၀ နှင့်မြှောက်လေ့ရှိကြပါတယ်။
&quot; losses=1-efficiency ပေါ့။&quot; လို့ ဆွေးနွေးထားတာက မမှားပေမယ့် နားလည်မှုရှုတ်ထွေးနိုင်စေပါတယ်ရှင်။
It&#039;sagood topic and article. Pls continue.